ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2016 » ဖေဖေါ်ဝါရီလ
လစဉ်မော်ကွန်း: ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2016
TSM Group မှ, Inc တည်နေရာ: Photoshop ကို၏ Elmsford နယူးယော့အမေရိကန်အသိပညာ, ရုပ်ပုံများကိုအပ်လုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိုင် Format ။ သငျသညျဓာတျပုံများအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူကောလိပ်ကျောင်းရှိပါသလား ... နောက်ထပ် >>
COMSOL တည်နေရာ: မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ပုံစံအင်တာဗျူးများ၏ဘာလင်တန် MA အမေရိကန်ဗီဒီယိုကိုထုတ်လုပ်ခြင်း, ဖြစ်ရပ်ဗီဒီယိုဖိုင်နှင့်မြှင့်တင်ရေးဗီဒီယိုများ။ Adobe ကထုတ်လုပ်မှုပရီမီယံ Suite (အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက် ... နောက်ထပ် >> ၏အဆင်ပြေအသိပညာ
ဥဩ-BookStrand, Inc တည်နေရာ: လိုအပ်ပါက Austin TX အမေရိကန်, Photoshop မှာအသေးအဖွဲအဖုံးကိုပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ပါ။ တစ်ဦး template ကိုအောက်ပါ Photoshop ကိုမှတဆင့်ပုံနှိပ်ဖုံးလုပ်ကွက် Create ... ။ more >>
Las Vegas, ဖေဖော်ဝါရီ 29, 2016 - ထို 2016 ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောင်း Las Vegas မှာအဆိုပါ Wynn ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌ပယ်နှစ်ထပ်အခါ, ဂယ်ရီ Vahling, အသံလက်ရာ, Inc ၏ပိုင်ရှင် / သမ္မတနဲ့သူ့အဖွဲ့သားတစ်ဦးကြိုးမဲ့အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်ပေးတာဝန်ပေးထားတဲ့ CNN ကန့်ပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများသည်။ Vahling များအတွက်အများဆုံးခေတ်မီ RF ဖြေရှင်းချက်၏ Wisycom, ဒီဇိုင်နာနှင့်ဆောက်မှလှည် ့. ...
မကြာမီတီဗီ Spectrum Repack များအတွက် Dielectric အားကောင်းလာစေရန် VHF Portfolio
နယူးဘရော့ဘန်းအင်တင်နာ, tunable filter ကိုပိုမိုမြင့်မားထိရောက်မှုကိုဆောင် ခဲ့. ထုတ်လွှင့်ဖို့ သာ. ကြီးမြတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ထံမှဖက်ပြောင်းနှင့် / သို့မဟုတ် RF မျှဝေစက်ရုံများ Raymond, မိန်း - ဖေဖော်ဝါရီလ 29, 2016 - Dielectric, တီဗီနှင့်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ချက်-အင်ဂျင်နီယာအင်တာနာများနှင့် RF စနစ်များအတွက်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦး, High-တီးဝိုင်း VHF ထုတ်လွှင့်မယ့် tunable, bandwidth ကို-အကျိုးရှိစွာ option ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအသစ်တခုဘရော့ဘန်းတီဗီပေးပို့မှုစနစ်ဖန်တီးထားသည်။ ပြီးပြည့်စုံသော ...
Dallas - PrimeTime ထုတ်လွှင့်စတူဒီယိုဘို့နဲ့ LED အလင်းရောင်တူရိယာတစ်ခုတစ်ခုလုံးကိုလိုင်းကြေညာခဲ့သည်။ Glen ဟန်, PrimeTime Lighting Systems ကကျနော်တို့တိုင်းရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်စတူဒီယို application များအတွက် LED လ်တာ၏မိသားစုပူဇော် "ဖော်ပြထား၏ CEO ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ LED ကို luminaires, အစွမ်းထက်နှင့်လုံးဝတိတ်ဆိတ်အပိုတောက်ပနေကြသည် "ဒီစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်နှင့်တာရှည်ခံ LED ထုတ်ကုန်လိုင်းကိုတပ်ဆင်ထား: ။ မဆိုနဲ့ LED အများအပြားအတွက်ငါးနှစ်တွင်အာမခံခြင်းမရှိပါပရိတ်သတ် ...
Balaji Telefilms selection Xstream နှင့် Diagnal မျိုးစုံကိရိယာများပေါ်တွင်၎င်း၏ဂလိုဘယ် OTT Entertainment ကဝန်ဆောင်မှု, ALT Balaji, ပါဝါမှ
မွမ်ဘိုင်း, အိန္ဒိယ, ဟောင်ကောင်နှင့်ကိုပင်ဟေဂင်, ဒိန်းမတ် - ဖေဖော်ဝါရီလ 29th, 2016 - Balaji Telefilms, အိန္ဒိယ၏အကြီးဆုံး TV နဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယိုယနေ့ powering အဘို့, Xstream, OTT ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူနှင့် Diagnal, အာရှရဲ့ဒေသဆိုင်ရာ OTT အထူးကုနှင့်အတူ၎င်း၏မိတ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြေညာ ၎င်း၏လာမည့် OTT ဖျော်ဖြေရေးဝန်ဆောင်မှု, ALT Balaji ။ Xstream ၏ cloud-based ကိုဗီဒီယိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်, Xstream MediaMaker ™, ALT Balaji ရဲ့ multiscreen တိုးပွားစေမည်သာ ...
နွေရာသီ International - ဓါတ်ပုံ
Mohawk အဘိဓါန်စက်မှုလုပ်ငန်း, Inc မှတည်နေရာ: Calhoun GA အမေရိကန်အလင်းကို Photoshop အလုပ်။ Mohawk အဘိဓါန်ရဲ့ဒေါင်လိုက်ပေါင်းစည်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးဖြစ်စဉ်များ, ကော်ဇောများထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ကျောဇောယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်များကို ... နောက်ထပ် >>
1 ၏စာမျက်နှာ 4812345 » 102030...နောက်ဆုံး»